thinzar's blog: Dumpling Soup (ဖက်ထုပ်)
ဒီ weekend မှာ ဖက်ထုပ် လုပ်စားဖြစ်တယ်။ ပြုတ်စားတာဆိုတော့ ဈေးမှာရောင်းတဲ့ ဖက်ထုပ်အရွက်ဝယ်ပြီးလုပ်တာ အဆင်ပြေတယ်။ သူက ပါးပါးလေးဆိုတော့။ ဖက်ထုပ်ကြော်က ဂျုံပြားနဲနဲထူမှ စားကောင်းတာဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုလှိမ့်တာ ပိုကောင်းတယ်။
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးဆိုတော့ ဖက်ထုပ်ထဲမှာ ထည့်တာတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နည်းနည်းကွဲတယ်။ ကျမတော့ ကျမကြိုက်တဲ့ပုံအတိုင်းလုပ်တယ်။ ဖက်ထုပ်အတွက် အဓိက အကျဆုံးကတော့ ကြက်သားပြုတ်ရည် ကောင်းကောင်းတစ်အိုး အရင် ရဖို့ပါဘဲ။
ကြက်တစ်ကောင်ကို နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီး ဆားနဲ့ နယ်ထားလိုက်တယ်။ ဂျင်း ၃တက်လောက်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနည်းနည်းကို ထုပြီးထည့်တယ်။ ဆားဝင်သွားအောင် တစ်နာရီလောက် နပ်ထားလိုက်ပြီးမှ မီးပေါ်တင်တယ်။ ၄၅မိနစ်လောက် ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကြက်သားပြုတ်ရည် ချိုချိုလေး တစ်အိုးရပါပြီ။ ဟင်းရည်ပွက်သွားမှ ငရုတ်ကောင်း၊ ချောက်ကော ထည့်တယ်။
ဖက်ထုပ်ထဲထည့်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အစာတွေကတော့
- Dumpling Pastry (2 ထုပ်ဆိုရင် သုံးယောက် အဝစားလို့ရတယ်)
- အမဲသား (သို့) ကြက်သား
- Ku Chai အရွက် (သို့) ကြက်သွန်မြိတ်
- ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူထောင်း၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ချောက်ကောမှုန့်
ပဲပင်ပေါက်၊ ku chai ရွက် (မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်လဲ မသိဘူး။)၊ အမဲသားတို့ကို သေးသေးလေးစီစဉ်း၊ ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူအရည်၊ ပဲငံပြာရည် အနည်းငယ်၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ချောက်ကော ထည့်ပြီး ရောနယ်လိုက်တဲ့အခါ ဖက်ထုပ်ထဲ ထည့်တဲ့ အစာ ရပါပြီ။ အိမ်မှာတော့ ဒီအစာက ဖက်ထုပ်ကြော်လုပ်ရင် ထည့်တာများတယ်။ ရိုးရိုး ဖက်ထုပ် ပြုတ်စားတဲ့အခါ အမဲသား ကို ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူအရည်ညစ်ထည့်ပြီး ဒီအတိုင်း အစာထည့်တယ်။ ကျမကတော့ အသားချည်းဆို နည်းနည်းအီလို့ အရွက်နည်းနည်း ပါတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ku chai က အမဲသားရဲ့ အညှီနဲ့ကို တော်တော်ပျောက်စေတယ်လေ။
ဖက်ထုပ်ခေါက်တာကတော့ ကိုယ်ကြိုက်သလို ခေါက်လိုက်လဲ ရပါတယ်။ ကျမလုပ်တဲ့ပုံကိုတော့ ဘယ်လို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ရှင်းပြရမလဲ မသိတော့ဘူး။ ကောက်ညှင်းမှုန့် (သို့) corn flour အနည်းငယ်ကို အရည်ဖျော်ထားပါ။ ဖက်ထုပ်အရွက်အလယ်မှာ အစာကိုထည့် နှစ်ခြမ်းခေါက် ပြီးရင် အခုနကဖျော်ထားတဲ့ ရေနည်းနည်းတို့ပြီး ကပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ထောင့်နှစ်ဘက်ကို ရေနည်းနည်း သုတ်ပြီး ထပ်လိုက်ရင် အပေါ်ကပုံအတိုင်း ရပါတယ်။ ဖက်ထုပ်ကြော်စားချင်ရင်တော့ ဘေးကတစ်ခုလိုမျိုးခေါက်ပါ။
ရေနွေးပွက်ပွက်မှာ ဖက်ထုပ်တွေကို ထည့်ပြုတ်ပါ။ ကျက်သွားပြီဆိုရင် ဆယ်ပြီး ခုနက ပြုတ်ထားတဲ့ ကြက်သားဟင်းရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီး ဆီသတ်၊ ပဲငံပြာရည် အနည်းငယ်၊ သံပုရာသီး တို့ကို ထည့်လိုက်ရင် အရသာရှိတဲ့ ဖက်ထုပ်ပြုတ် ရပါပြီ။
ဖက်ထုပ်လို အစားအသောက်မျိုးက လူများရင် စားလို့ပျော်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တစ်ခု ဝိုင်းလုပ်လိုက်ရင် ခဏလေးနဲ့ ချက်လို့ ပြီးတဲ့အစာမျိုး။ တရုတ်လူမျိုးတွေကတော့ နှစ်သစ်ကူးလိုမျိုး မိသားစု စုံစုံညီညီ ရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင် ဖက်ထုပ်လုပ်စားကြပါတယ်။ ကျမတို့အိမ်မှာဆိုရင် တစ်ယောက်က ဂျုံနယ်၊ တစ်ယောက်က ဂျုံလှိမ့်၊ တစ်ယောက်က အစာထည့်ပြီးခေါက်၊ နောက်တစ်ယောက်ကချက်နဲ့ မိသားစုဆုံတဲ့အချိန်တုန်းက စားခဲ့ရတာမျိုး ဘယ်အချိန်မှ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ကြုံရမလဲမသိတော့ဘူး။ ဖက်ထုပ်လုပ်စားတိုင်း အိမ်ကို လွမ်းမိတယ်။
22/12/08 12:34 PM
23/12/08 12:13 AM
ဗိုက်ဆာတုံးမှ ဖတ်မိတယ်။ စားချင်လာပြီ :P ရှလွတ်။ ပလွတ်ပလွတ်ဆိုပြီး အလုံးလိုက်မြိုချလိုက်ချင်တယ်။
23/12/08 10:08 AM
စားချင်လိုက်တာ။ ဒါပမဲ့ အဲလိုလဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည်မလုပ် တတ်ပါဘူးလေ။
ပုံတွေကြည့်ပြီး သွားရည် ကျ ပြီးပြန်သွားပါ၏
( မျှစ်ဘယ်နားဝယ်လို ့ရလဲ ပြောထားပြီးပြီး)
23/12/08 2:12 PM
မဇနိ>> တရုတ်တွေ အနေများတဲ့ဘက်မှာ ရမှန်ထင်တယ်။ တစ်ချို့ တရုတ်ဆိုင်တွေမှာ အဲဒီဖက်ထုပ်အရွက်နဲ့ Wan Tan ဆိုပြီး လုပ်ရောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်နားရမလဲ မေးကြည့်လေ။ စူပါမားကတ်တွေမှာတော့ အများအားဖြင့် စမူဆာ၊ကော်ပြန့်လုပ်တဲ့ အရွက်တွေနားမှာ ရှိတတ်တာ များတယ် အစ်မ။
Naing Tun Win>> ကွန်ပျူတာပါ မျိုချလိုက်သလား???
လင်း>> လုပ်ရတာ သိပ်အလုပ်မရှုပ်ပါဘူး လင်းရဲ့။ စိတ်မရှည်လဲ လုံးပြီး ဟင်းရည်ထဲ ပစ်ထည့်လိုက်ပေ့ါ :)
23/12/08 5:09 PM
Wow.....Very very good...I was looking for that...Now I got it....thanks... :D
ညီမရေ အခေါက်အခေါက်လာဖတ်ပြီး အရွက်ဝယ်လာခဲ့ပီ။
တရုတ်ဆို်င်မှာ လုပ်ပြီးသားတွေရှိပေမယ့် အမလည်း ညှီမှာကြောက်လို့။
24/12/08 10:08 AM
Harun>> let me know after u tried, k? :) wanna know whether I hv writtenaproper receipe
မဇနိ>> အရွက်ဝယ်လို့ရသွားပြီဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ သဉ္ဖာတော့ KL မှာ ရှာတာ လေးနှစ်နေမှ တွေ့တယ်။ အဲဒါတောင် Giant နဲ့ ORI နှစ်နေရာမှာဘဲ တွေ့တာ။ လုပ်ပြီးရင် အစ်မဘလော့ဂ်မှာ လာကြည့်မယ် :)
24/12/08 5:01 PM
ဖက်ထုပ်လာစားလို့ ရပြီ -
24/12/08 5:58 PM
(ဂလု) ၊ ဒါမှတစ်ပါး အခြား မတတ်နိုင်ပြီ :(
26/12/08 5:01 PM
ကျေးဇူးပဲဗျာ ...အခုမှ ဘယ်လိုကောင်းကောင်းစားရမှန်းသိတော့တယ် ကျနော်ဝယ်ပြီး မလုပ်တတ်လို့ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ပ်နဲ့ပဲ တို့စားလိုက်တာ ပစ်လိုက်ရတာလည်းမနည်းဘူး (အရသာမရှိလို့)...လုပ်စားလိုက်ဦးမယ်
29/12/08 3:24 PM
ကိုဖိုးစံ>> :D အဆန်းဘဲ .. ခရမ်းချဉ်သီးဆော့်စ်နဲ့ တို့စားတယ်?? လုပ်ကြည့်ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်နဲ့ တို့စားတာထက် စားကောင်းလား ပြောဦးနော်။
30/12/08 5:20 PM